Cristina Sánchez Andrare ရေးသားသော ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများအတွက် လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ
Como diría Sabina, «no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás, sucedió». Bajo el telón de la realidad, las leyendas conforman esa suerte de épica nostágica que engrandece los hechos o los enrarece. Al final queda el compendioaambos lados de los hechos. La literatura de Cristina …
Chris Whitaker မှ အဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စတင်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အနက်ရောင်အမျိုးအစားသည် ဖြစ်တည်မှုအပေါ် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော အဓိပ္ပါယ်ကို ယူဆောင်သည်။ Víctor del Arbol ကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များ အလားတူ တစ်စုံတစ်ခုသော အဖြစ်အပျက်သည် ဤစာရေးဆရာနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆက်သွယ်မှု၏ အခြားအချက်တစ်ခုနှင့် ရောက်ရှိလာသော Chris Whitacker နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပေသည်။
Javier Cercas မှ Barbazul ရဲတိုက်
Vázquez Montalbán ၏မှန်ထဲတွင် သူ့ကိုယ်သူကြည့်နေသော စုံထောက်အမျိုးအစား၏ မျှော်လင့်မထားသော အရှိဆုံးသူရဲကောင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Melchor Marín သည် ၎င်း၏ အာကာသ-အချိန်-ကြံစည်မှု ကွဲပြားမှုများကြောင့် လူဝင်စားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အုံ့မှိုင်းသောရုံးခန်းများ သို့မဟုတ် ဘာစီလိုနာတွင် အမှောင်ဆုံးညများကြားတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ Pepe Carvalho ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Javier Cercas တင်မကပါဘူး..။
Maude Donegal ၏အမွေအနှစ်။ The Surviving Son: Joyce Carol Oates မှ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဝတ္ထု နှစ်ခု
ဝတ္ထုအသစ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်းတို့ပေးပို့သည့် အမျိုးအစားကို ကျော်လွန်သော စာရေးဆရာများ ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ Oates ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအုံ့မှိုင်းသောလှုံ့ဆော်မှုအစုအဝေးဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သေဆုံးခြင်း၏အဆုံးစွန်သောအတိုင်းအတာအထိ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားမှုများဆီသို့တစ်ဖွဲ့လုံးချဉ်းကပ်သည်ဟုယူဆသည် ။
Pierre Lemaitre ရေးသားသော Black Novel ၏ စိတ်အားထက်သန်သော အဘိဓာန်
Noir အမျိုးအစားသည် ယနေ့ခေတ်စာပေ၏ အခိုင်မာဆုံးသော ခံတပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှု သို့မဟုတ် မြေအောက်ကမ္ဘာဇာတ်လမ်းများ၊ ကျော်ကြားသော ရေဆိုးမြောင်းများကို အုပ်ချုပ်သည့် အမှောင်ရုံးများသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အမှုအခင်းများကို ဖြေရှင်းရန် ၎င်းတို့၏အရေပြားကို ချန်ထားခဲ့ရသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ။ ပြီးတော့ Pierre Lemaitre က အဲဒီထဲက တစ်ယောက်ပါ..။
César Aira မှ ဥယျာဉ်မှူး၊ ပန်းပုဆရာနှင့် ထွက်ပြေးသူ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတဲ့ စာရေးဆရာတိုင်းဟာ သူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာသာမက ယေဘုယျအားဖြင့် စာပေမှာပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အလုပ်တွေကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ Avant-garde သည် စံနှုန်းဖြစ်သောကြောင့် César Aira သည် လျော့မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ လုံးဝမဆိုးပါဘူး...
Página1 Página2 ... Página131 အောက်ပါ →